Magaalaa Jimmaa keessatti barattoonni Yuunibarsiitii Akka Malee Dararamaa Jiraachuun Himame. | QEERROO
Magaalaa Jimmaa keessatti barattoonni Yuunibarsiitii Akka Malee Dararamaa Jiraachuun Himame.
Posted on November 29, 2017 by Qeerroo
Gaaffii karaa nagaa gaafataniin mooraan yuunibarsiitii Jimmaa barattootatti baacuun isaa akka malee aarsuun diddaan guyyaa guyyaan barataan agarsiisu dabalaa bule. Haalli mooraa Yunibarsiitichaas nagaa hongaa’ee buluu jalqabe.
Deebiin barattoonni argatan karaa humna Waraanaa dararamuu, reebamuu, hidhamuu fi doorsifamuu ta’e. Barataa dhoksaatti qabanii bakka barataan hinarginetti qabuun naannoo Faranji Araadaa jedhamtu kan humni waraanaa kireeffatee mandheeffatee keessatti waggoota dheeraaf dudduuba manichaatti barataa reebuuf kan oolutti geessuun barataa reebuutu itti fufe.
Barataan Mooraa Jimmaatii qabamu konkolaataa patiroolii keessa galuun harkaaf miila erga cancalaan hidhamee booda, konkolaataa keessa garaan ciimsanii irra keessa dhaabatanii Qawwee isaanii afaan buufatanii garanaa garas dhaabbachuun kaawwan barataa harkaaf miilla ija hidhame sanarra dhaabbachuun bakka sanaan ga’u. Erga manicha seenaniis duugduuba manichaatti ijarraa hidhaan hiikama.
Sana booda adaba jalqabaa Funyoodhaan gadi galagalchanii fannisu. Ofii fuuldura ta’anii Huskii dhugaa itti qoosuun jalqaba. “ABO kee waammadhu dhufee si haa hiikuu, miseensa kee nuu eerii” jalqabu. Sana
booda dhugaatii quuffatanii irree jabeeffatanii fannootti gad buusu. Fannoorraa erga bu’een booda hanga qaamnisaa guutuun dhiiga ta’utti reebichi itti fufa. (Yoo bilisoomneef guyyaa tokkoof manichi akka mana
hidhaa Oshwizi kan Jarmaan keessatti seenaan ol kaa’a). Naannoon (environment) bakkichaa, girgiddaan manichaa dudda duubnisaa dhiiga qofaadha. Dhiigni girgiddaa manaatti goggogee jiru nama surura.
Harkaaf miilakee hidhanii gad galagalchanii erga fannisanii booda barruu miillaa keessas dabaree Tubboo gurrachaan kaawwanimmoo shiboon nama reebu.
Erga hanga fedhan reebanii booda, ibsaa qabsiisu (Torture). Sana booda yoo duute gad baasanii bakka Kosiitti gatu. Barattoonni Mooraa keessaa dhabaman hedduun adeemsa kanaan du’anii dhabamaa turaniiru. Akka odeeffannoo qaamota isaaniirraa argannetti, bara darbe mucaa tokko du’e jedhanii kan gatanii ergasii kosii keessaa jiraattoonni magaalaa arganii bayyanachiisanii ammallee barataa akka jiru naaf himan. Yakki kun gidduu kana haala addaatiin adeemaa jira.
Yakkoota kana cinatti barattoota mooraa keessaa ba’an ol galchuu diduun barattoonni beelaaf saaxilamanii jiru. Yakki hamaan barattoota Yuunibarsiiti Jimmaa irratti raawwataa jira. ID harkaa jijjirame milkard biraan hojjetamee laatamaa jira. ID ykn eenyummeessaa durii cinatti milkardii haaraa sana hinqabdu taanan yakkamaa taatee hidhamta. Milkaardiiin immoo miseensa OPDO dabballoota Wayyaanee
qofaaf laatama. Dararaa hedduu keessa jjirra jechuun Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof gabaasanii jiru.